ICC: Kenyaatta ha hor yimaada maxkamadda - BBC Somali
ICC: Kenyaatta ha hor yimaada maxkamadda
Image caption Madaxda Qaaradda Afrika ayaa horey isugu deyay in Mr Kenyatta laga tuuro eedaha ay ICC u haysato
Maxkamadda Dambiyada dagaalka ee ICC ayaa diiday codsigii Madaxwaynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku doonayay in uu ka baaqsado in uu ka hor muuqdo Maxkamadaasi todobaadka soo socda.
Todobaadkii hore madaxwaynaha ayaa ku cudur daartay in uu aad mashquul u yahay. Uhuru Kenyatta waxaa lagu eedeeyay in uu maleegay rabshadihii dhacay doorashadii lagu murmay ee 2007-dii oo ay ku nafwaayeen kun iyo laba boqol oo qof. Dhammaan eedahaasu wuu iska fogeeyay madaxweyne Kenya.
Go'aankaasi waxaa kale oo uu diiday codsigii uu soo mariyay qareenadiis ee ku aadanaa in Maqal iyo muuqal internet ka ah uu uga qaybqaato munaaqashada maxkamadda ICC.
Maxkamaddu waxa ay ku dooday in shirkaas la sheegay inuu Uhuru Kenyatta ka qeybgalayo, la go'aamiyay intii maxkamadu ay maalitaasi cayimatay kadib.
Kenya oo diidday eedeymaha ICC
ICC oo go'aan ka gaaraysa Kenyatta
5 Febraayo 2014
Afrika oo doonayso inay baddesho xeerka ICC
21 Nofembar 2013